Warruummaan oromoo bakka buune jedhan kun maaliif oromoo akka jibbaniif arrabsiisaniif nuuf galuu hin dandenye!!! - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWarruummaan oromoo bakka buune jedhan kun maaliif oromoo akka jibbaniif arrabsiisaniif nuuf galuu hin dandenye!!!
Warruummaan oromoo bakka buune jedhan kun maaliif oromoo akka jibbaniif arrabsiisaniif nuuf galuu hin dandenye.
Simannaa waraanaa hahahaha
Simannaa faradoo SULULTAA irraa birrii 500n kirreefamanii kaadirreewwan OPDO qofaan simatan kanarraa,,,,
Simannaa artiistiif qabsaayaa oromoo General artiist Umar suleeyman santuu caala.
Warruummaan oromoo bakka buune jedhan kun maaliif oromoo akka jibbaniif arrabsiisaniif nuuf galuu hin dandenye. Ormi Isa simatuuf dhaqe aadaa isaan fakkaatu uuffatanii ijaajju.
Obbo Lammaa, obbo Dinquu Dayyaas fi Dr. Warqinaa Gabayyoo sirna simannaa boolee fi Masaraa mootummaa irra hin turre garu 🔜
እዚህ ደሞ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ፋኖ ልዩ ሀይል ተብየው እየፈጠመባቸው ያለው ስቃይ
Baratoonnii oromoo akkanatti jiru
Yartuun abiyi jedhaa dhiichisti
Miseensotaaf Deegartootni ABO nama tokko cuunfannii ilaalanii waan sabaa hin Tolle dhugaa jirtu waliin itti himanii of irraa datbatu. Warrii ABO balaaleefatuun eegale oromoo guutuu arrabsuun golaabamu.
“#Siyaasan Sobamuu Kessaa Bahuu Qabna Oromoo.
Jijjiirama Siyaasa #Ethiopia Waggaa lamaan kana kessatti dhufe keessatti ummanni oromoo ilmaan isaa lubbuu dhaban 5000 ol fi Kan qaaman miidhaman #21000 dhabee Bu’aan Inni Argate yoo jiraate Warruma Kaleessa Wayyanee Waliin Tahuun Ummata Oromoo fixaa ture Gara aangootti Fiduu ummanni Oromoo kan kaleessaa caalaa akka Ummataatti Kabajuun hafee Tuffatamuudha.
Maaltu Rakkoo amma Oromoon kessatti kufe Kana fide Yoo janne ilaale wantoota armaan gadiitti.
1)Qabsaa’ootama Kaleessa Ummanni Amanee wajjiin Qabsa’aa Tureettu Qabsoo oromoo akka galma geessuuf Amaana ykn Adaraa Ilmaan #Abbaa Gadatti kenine jechuun ummani akka offirranfatee burjaajuu Siyaasa kessa akka galu godhuun Dogoggora Guddaan akka uumamu godhan. Ilmaan abbaa gadaa kaayyoo qabu uumaa sodaatu akkasumas safuu beeku garuu warri kun garuu ummata #oromoo dhiisi Waluu #Ganuu ykn #Kaaduu eegalaniiru.warra Kun warra safuu beeku miti warruma kaleessa ilmaan Oromoo Warra TPLF waliin tahanii nyaachaa turaniidha.
2).Ummanni Oromoo Ammalle Daldaltoota Siyaasa Bu’aa siyaasa fi Kabajaa Dhuunfaa isaaniif Jedhanii Yeroo Gara Yerootti ajandaa Ummataaf Uumuun Mooraan siyaasaa oromoo akka jeeqamtu godhaa jiru. Ummani oromoo kessattu Dhalooni Haarawni Daldala Siyaasaa kana addaan Baafatanii beekuu dhabuun #Burjaajuu siyaasaa uumuun caalatti Hawaasni oromoo akka hin kabajamneef waan sababa ta’uun Shoora Ol’aana Taphachaa jira.
#Daldaltootni kun gareen Tokko #TPLF waliin tahuun Dantaa oromoo eegsifna Jechaa ummata warra #TPLF kaleessa Jabaa oromoo dhabamsiisaa turan wajjiin #heerumaa ykn #Ga‘ila lammaffa gaggeessuf Oliif gadi yeroo fiigu inni kaan immoo Habashaa waliin sagagalaa jiru akkuma kaleessa baran.
#Waan Hundaafuu Ummanni oromoo kessattu Dargaggooni Keenya Siyaasa Akkanaattiin #burjaaja‘uu Dhiifnee Bifa Tasgabbii Qabuun Hordofuu Qabna. Kessattu akka lubbuun Namaa hin Baane Gochuun Yoo Dandeenye Bahatti Lubbuu Hambisuu Qabna jedha.
Yaada Dhuunfaa kiyaatti waan taheef yoon dogoggore dhiifama naaf godhaan Jedha.
=✓Eelayee garaatti baadhee
Dheedhii garaatti nyaadhee
Alaa fi mana mooyuudhaan
=✓Ilma koo tokkicha koo
Kan ani boruuf abdadhe
Diinni du’aan adabee
=✓Kichuu na jalaa citte
Tolosaan koo ilma abdii
Kanaaf cabde kunoo
Tiyyas qaamaaf qalbiin
=✓Tolosaa koo yaa ilma koo
Ani akkamiinan si obsaa…!?
=✓Obboleettiin teetis Caaltuun
Qaamaan na biraa deemtee
Biyya alaa baate
Jireenyi koos dullumaan
Jireenya kophaa taate
=✓Kan buna naaf dhaabu hin jiru
Ollaan na waamus hin jiru
Wanti hundi jijjiiramee
Bakka dur hin jiru
=✓Koottu na laali hintala too
Kan biyya alaa jirtu
Du’aa fi dullumnis lama hin jirtu
=✓Oolmaa harmeef Aayyoos
Garaatti hin nyaatin
Yoo harki sii gahe
Ofiif hin jiraatin
=✓Yaa hintala too Caaltuu
Obboleettii Tolosaa koo
Kunoo hireen tiyya
Ibidda bira hin tarre
=✓Yaa hiree yaa hiree
Hiree too ganamaa
Hangan lubbuun jiru
Hin eegu harka namaa.
~By Tufaa Wadaajoo.
“Simannaa Gootaa” Dr. Abiyyiif Qophaahe
MM Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad badhaasa Noobeelii Nagahaa badhaafaman fudhatanii guyyaa harraa gara biyyaa oggaa deebi’an Finfinneetti sirna namoonni kumaan lakkaawwaman irratti argamaniin simataman. Gabaasaan @VOAAfaanOromoo Muktaar Jamaal sirnicha hordofeera. #Nobel #NobelPeacePrize2019 #Oromo #AbiyAhmed #Ethiopia
Haasawaa fi gocha MM jala deemanii hordofuun sirriidha. Qeequunis mirga. Kuni arrabaa miti.
Har’a Nigusuu Xilahun, “በኦሮምኛ ትንሽ ተናገር…” kan jedhe ajandaa ta’eera. Nigusuu Xilahun bakka Abiy bu’ee cinqamuu isaa agarre. Maaliif cinqame? Abiy waan Oromoorraa fagaateef ummatni akka irratti hin barre siyaasaan hojjatamuu qaba. Osoo Dr. Abiy nama waan Oromoo yaadu ta’ee Nigusuun akka afaanicha dubbatu dhiibbaa irratti godhaa? Nama waan itti shakkan dafanii akka qajeelchuuf gorsan. Namni waan hin feene siyaasaaf qofa yeroo dhimma itti bahu abbaan dantaa ni miidhama. Haaluma saniin waan Oromoo kadhatanii akka siyaasaa irraa hin balleessine godhaa? Dr. Abiy badhaasa kana karaa Qeerrootiin argate. Osoo Qeerroo yaadatee afaan Oromoo ni yaadata ture. Gaafa aangoo qabatu “Qeerroo gaachana biyyaa” jechaa ture. Irra deddeebi’ee qeerroo faarsaa ture. Achirraa ka’ee ilma Abbaa Gadaa jedhame. Amma garuu Oromoo irraa baay’ee fagaachuu isaa ormi isa taajjabee sadarkaa “Oromoon maal nuun jedha? Mee afaan Oromootiinis waa jedhi” jedhamurra ga’e. Kuni waan nama dubbisu!
Dr. Abiyyi ajaja habashaatiin qofa socho’a yeroo jennu ragaa malee miti. Nugusuun akkasitti Afaan Oromoon dubbadhu jedhee eeyyamnaaniif dubbachuu eegale. Qaanyii kana Oromoon gurra qabdu dhagahi🤦🏽🧏🏻‍♂️